Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2010 (5)
Q and A September 2010 (5)
1. မျက်လုံး အားတိုးဆေး စားရုံနဲ့
2. ကျွန်တော်အခု ဗိုက်က နာနာနေပါတယ်
3. Can I do blood donation?
4. ကိုယ်ဝန်စရှိပြီး နောက်တကြိမ် ဆက်ဆံရင်ရော ရပါသလား
5. သမီးမှာ နှာစေး အမြဲလိုလို စေးနေတတ်ပါတယ်
11 Sep 10, 11:23
ဆရာရှင့် minus power ရှိတဲ့ မျက်စိဝေဒနာရှင် တစ်ယောက်ဟာ မျက်လုံးအားတိုးဆေး စားရုံနဲ့ Power လျှော့နိုင်ပါသလားရှင်။
ဆောရီး။ မျက်မှန်တပ်ရသူတွေအတွက် အနုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အပေါင်းဖြစ်ဖြစ် အားဆေးဆိုတာ မရှိပါ။ မျက်စိအားဆေးလို့ အများ အလွယ်ခေါ်နေကြတာက ဗီတာမင် အေ၊ တမျိုးထဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်မြက်သင့် ဆိုတဲ့ ညနေ အလင်းရောင် နည်းလာချိန်မှာ မျက်စိ ကောင်းကောင်း မမြင်ရတဲ့ ရောဂါအတွက်သာ ကောင်းတယ်။ ကောင်ယုံ မကပါ ပျောက်စေပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် တံတောင်ဆစ်၊ ဒူးနေရာတွေမှာ အသားအရေ ကြမ်းပြီး ကြာဆူးတွေ ထနေတာလည်း ဗီတာမင် အေ နည်းတာဘဲ။ မျက်မှန်တပ်ရသူတွေ အရွယ်နဲ့အမျှ ပါဝါက တက်တက်လာတတ်တယ်။ အသက်ရလာရင်တော့ ပြန်သက်သာလာနိုင်တယ်။
ကျွန်တော် အသက်(၂၃)နှစ်ရှိပါပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာ ၃ နှစ် ကျောင်းတက်ရမှာဖြစ်ပြီး အခု နောက်ဆုံးနှစ်ကို စတက်နေရပါပြီ။ ကျွန်တော်အခု ဗိုက်ကနာနာနေပါတယ်။ မနက်ခင်းအစော အိပ်ယာထရင် ဗိုက်က ပိုပြီးနာတက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထမင်းစားရင်၊ အစပ်တွေစားလိုက်ရင် ထမင်း ဆက်စားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဗိုက်နာရင် တစ်ခါတစ်ခါ နောက်ကျောသို့ အဲဒီအနာက ပေးပို့တက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ နောက်ကျောပါနာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ နံရိုးပါ နာတက်ပါတယ်။ ညာဘက် အောက်ဆုံး နံရိုး နားလေးကပါ။ ကျွန်တော် ဗိုက်နာတဲ့ နေရာက (ချက်) အနီးနားလေး အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝိုက်မှာ ကပ်နာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ချက်အပေါ်ဘက်မှာ နာတက်ပါတယ်။ စပြီးတော့ ခံစားမိတဲ့ အချိန်က(၆) လပိုင်း အစလောက်မှာပါ။ စဖြစ်တုန်းကတော့ သတိမထားမိဘူး (အဲဒီတုန်းက လေချဉ် အရမ်း တက်တာတော့ သတိထားမိပါတယ်)။ နောက်ပိုင်း အစားအသောက်လည်း မဆင်မခြင်စားနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ရောဂါ ဝေဒနာက ပိုပိုဆိုးလာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ပါ ကျလာပြီး ပိန်သွားပါတယ်။ အခု ဒီက ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်တော့ အစာအိမ်အနာ ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆေးတွေ ရေးပေးပါတယ်။ ၅ မျိုး လောက် ရှိပါတယ်။ တစ်ပတ် သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးနာမည်တွေတော့ မရေးပေးတော့ဘူး။ ရုရှားလိုတွေ မိုလို့ပါ။ အခု တစ်ပတ် ပြည့်လို့ ရပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုထိတော့ ကောင်းကောင်း မသက်သာသေးပါဘူး။ ဗိုက်က နာနေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အခု အစားအသောက်လည်း ဆင်ခြင်နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာအကျိုးတွေ သက်ရောက်နိုင်တယ်။ ဘာဆေးတွေ သောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ဘာတွေစားဖို့၊ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အကျယ်တဝံ့နဲ့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါမယ်။ အစာအိမ်လေနာ ဖြစ်ဘို့များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေသေခြာခြာ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးမှ ဟုတ်-မဟုတ် ပြောတာ ကောင်းပါမယ်။ ပြောပြတဲ့ နာတယ်ဆိုတဲ့ နေရာအားလုံး ဒီရောဂါမှာ အကြုံးဝင်ပါတယ်။ ဆန်းသလိုရှိတာက “ညာဘက် အောက်ဆုံး နံရိုး နားလေးကပါ” ဆိုတာ ဖြစ်နေတယ်။ အသဲနေရာ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဆီးဝါ-မဝါ သတိပြုပါအုံး။
"Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည်။" ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဖတ်ပြီး၊ လုပ်သင့်တာ၊ လုပ်လို့ရတာတွေ လုပ်ပါ။ နောက်လိုသေးရင် ပြောပါအုံး။ အားနာစရာမလိုပါ။ အဝေးနေရသူ ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် စာနာစိတ် အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာပါစေ။
14 Sep 10, 11:59
I am 36 years old and my body weight is 80 KG = 176 lb and my blood pressure is 140/90. I would like to do blood donation. Can I do blood donation? Kindly explain me detail about blood donation with Myanmar language to my mail. Your quick reply will be highly appreciated.
အောက်က စာ ၂ ပုဒ်က ကျွန်တော် ရေးတာ မဟုတ်ပါ။ http://health.ngoinmyanmar.org/ ထဲမှာ တင်ထားတာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီး အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။ မေးတာကို တိုက်ရိုက် ခပ်တိုတို ဖြေရရင် - သွေးလှူဘဏ်က စစ်ဆေးလို့ လက်ခံရင် လှူနိုင်ပါတယ်။ လှူမဲ့သူမှာ သွေးအား ကောင်းနေရင်၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ HIV ပိုးမရှိရင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ သွေးအားကောင်းတယ်ဆိုတာ သွေးဖိအား BP နဲ့ တိုက်ရိုက် မသိနိုင်ပါ။ ၄ လတခါ လှူနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ဆရာ ခုလိုပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သမီး ဆေးဆိုင်မှာ မေးကြည့်တော့ တကယ်လို့ ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ဝန် ရှိတယ်ထင်လို့ ရာသီမလာသေးရင် သူက သောက်လဲ သောက်လို့ရတယ်။ မိန်းမကိုယ်ကလဲ ထည့်လို့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ. အဲဒီဆေး သုံးသင့်ပါသလား။ နောက်တခုမေးချင်တာက ကိုယ်ဝန်စရှိပြီး နောက်တကြိမ်ဆက်ဆံရင် ရောရပါသလား။ အခုလောလောဆယ် သေချာအောင် ဆီးစစ်ဆေး ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ စစ်ကြည့်မလို့ပါ။ တကယ်လို့ ရှိနေရင် အဲဒီဆေး သုံးသင့်ပါသလား။ ရာသီလရမဲ့ရက် ကျော်နေတာ ၁၅ ရက်လောက် ရှိပါပြီ။
Ecee2 = Levonorgestrel ဆေးက အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး Emergency contraceptive ဖြစ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံအပြီး၊ ၃-၅ ရက် အတွင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် တားဆေးအဖြစ် မသုံးရပါ။ သောက်ဆေးရော ထည့်ဆေးပါ ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန် ရှိလာပေမဲ့ နောက်တကြိမ် မကပါ၊ ကိုယ်ဝန်ရင့်တဲ့အထိ အတူနေလို့၊ ဆက်ဆံလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ကဘဲ တယောက်က မေးသေးတယ်။ Positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ရှိတုံး ဘယ်လို သတိထား ဆက်ဆံရမယ်၊ ဘယ် (ပိုဇေရှင်) တွေ သုံးသင့်တယ် ဆိုတာ ဖြေခဲ့ရပါသေးတယ်။ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း မေး-ဖြေတာမျိုးမို့ (ဘလော့ခ်) မှာ မတင်ပါ။
Sep. 14, 2010 at 1:18 PM
သမီးမှာနှာစေး အမြဲလိုလို စေးနေတတ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ နည်းနည်းကြာမှ ဖြစ်တတ်တာပါ။ မနက် မိုးလင်းလို့ ရေကိုင်ရင် နှာချေပါတယ်။ နောက်တော့ ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အခုတလောမှာတော့ ဆက်တိုက်ကို တစ်နေ့လုံး နှာချေ၊ နှာရည်ယို နေတတ်ပါ။ ဆေးအနေနဲ့ အရင်ကတည်းက Cetrizine ကို တစ်လုံးပဲ သောက်ပါတယ်။ ခါတိုင်းဆို ပျောက်သွားတတ်ပြီး ချက်ချင်း ပြန်မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ အခုတလောမှာတော့ ဆေးသောက်လည်း ခဏပဲ သက်သာပြီး၊ ပြန်နှာစေးတာပါပဲဆရာ။ အအေးခံလို့လည်းမရပါ၊ နည်းနည်း အေးတာနဲ့ နှာချေတော့တာပါပဲဆရာ။ အထွေထွေကု သို့မဟုတ် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ဆရာဝန်ထဲမှ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါသလဲ။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါသလဲ။ သမီးအထင် ဓာတ်မတည့်တာတော့ ဖြစ်မည်မထင်ပါ။ ဓာတ်မတည့်စေမယ့် အရာများ သမီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိလို့ပါ။ (ခန့်မှန်းကြည့်တာပါဆရာ)။ သမီးရဲ့ နှာခေါင်းကတော့ တော်တော် Sensitive ဖြစ်တာ အရင်ကတည်းကပါ။
ရေးပြီးသာ ၃ ပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုသေးရင် မေးပါ။
Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း
Posted by Dr. Tint Swe at 8:10 PM